Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Airlinesgbọ elu ụgbọ elu Hawaii na-eweghachi ụgbọ elu na Tahiti
Airlinesgbọ elu ụgbọ elu Hawaii na-eweghachi ụgbọ elu na Tahiti
Iigbọ elu ụgbọ elu Hawaii mara ọkwa taa nlọghachi nke ụgbọ elu n'etiti Aloha State na Tahiti bido na August 7.
Mbido ọrụ a na-esochi mwepụta nke usoro nyocha tupu njem eme njem n'etiti Hawaiʻi na French Polynesia nke na-enye ohere maka njem enweghị ego kwụrụ ụgwọ n'ime nnukwu agwaetiti abụọ ahụ.
Hawaiian ga-eweghachite otu izu kwa izu na-efegharị n'etiti Honolulu nke Daniel K. Inouye International Airport (HNL) na Tahiti's Fa'a'ā International Airport (PPT).
A ga-eduzi ụgbọ elu na ụgbọ elu ụgbọelu 'ọdụ ụgbọ elu Airbus A278 nke 330.
Hawaiian malitere ya inaugural Hawaiʻi - Tahiti njem ụgbọ elu na June 1987. Mgbe ahụ a kwụsịrị ụgbọ elu na March 2020 n'ihi ọrịa COVID-19. Eburu ụgbọ elu nke ụgbọ elu ahụ ga - ekwe omume site na mmemme nnwale tupu njem nke Hawaiʻi Gov. David Ige na French Polynesia President Édouard Fritch guzobere - sitere na obere okwu COVID-19 n'ime ebe 2.
"Anyị na-atụ anya ijikọghachi agwaetiti anyị, mana nke kachasị mkpa, ijikọ ndị ezinụlọ anyị na-ahụbeghị ibe ha kemgbe otu afọ," ka Peter Ingram, Onye isi ala na onye isi na Hawaiian Airlines kwuru. "Anyị nwere ekele maka nnukwu ọrụ gọọmentị nke French Polynesia na Hawai'i na-arụ iji mepee njem n'etiti mpaghara anyị."
Hawaiʻi na French Polynesia ga-eme ihe siri ike ịchọrọ maka njem maka nchekwa na ọbịa. Ndị na-esi na PPT na HNL na-apụ ga-emecha ma bulite nsonaazụ nnwale sitere n'aka Institut Louis Malardé, bụ onye nyocha nke steeti kwadoro, na steeti nke Hawaii Usoro njem nchebe. Ndị ọbịa na-apụ apụ na PPT si HNL ga-enye ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma mezuo gọọmentị nke chọrọ Tahiti nke COVID-19 chọrọ tupu njem. Ndị anaghị erube isi ga-edo onwe ha iche iche iche ụbọchị iri.
“Ọtụtụ ndị bi na Hawai'i nwere ezinụlọ na Tahiti, and nabata ndị ọbịa anyị si na French Polynesia na Hawaiʻi bụ ihe dị mkpa iji mee ka mmekọrịta chiri anya dị n’etiti mpaghara anyị abụọ, ”ka Govanọ David Ige nke Hawai kwuru.
Iigbọ elu ụgbọ elu Hawaiian HA481 ga-apụ HNL na 3: 35 pm na Satọde, Ọgọstụ 7 wee rute na PPT na 9:30 pm Flight HA482 ga-apụ PPT na 11:30 pm n'otu mgbede wee banye HNL na 5: 15am nke na-esote ụbọchị.
Hawaiian's “Na-echebe gị” enwekwu nhicha na-agụnye disinfecting ọtụtụ oge nke ebe ezumike, kiosks, na counters counters, electrostatic ụgbọ elu ụlọ spraying, plexiglass mgbochi na staffed ọdụ ụgbọ counters, na sanitizer ehichapụ nkesa niile ọbịa. Onye agha ahụ chọrọ ndị ọbịa niile iji mezue a ụdị nnabata ahụike n'oge usoro nyocha na-egosi na ha enweghị akara mgbaàmà COVID-19 ma kwenye na ụlọ ọrụ ahụ iwu nkpuchi nkpuchi maka njem ha dum.